SoapUI: APIs को साथ काम गर्नको लागि ईन्साइडर उपकरण Martech Zone
सोमबार, मार्च 4, 2013 बिहीबार, मार्च ० 7, २०२० Douglas Karr
यस्तो देखिन्छ कि हरेक चोटि म राम्रो साथीलाई भेट्छु, नयाँ उपकरणको बारेमा सुन्छु जसले जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ। म संग कफी थियो डेभिड ग्रिग्स्बी, एक .NET एकीकरण राक्षस जो कागजातका लागि काम गर्दछ। डेभिड र म SOAP (सरल वस्तु पहुँच प्रोटोकल) बनाम छलफल गर्दै थियौं REST APIs (त्यो हामी कसरी रोल गर्छौं)। म REST एपीआई लाई मन पराउँछु किनभने उनीहरू एकै पटकमा दृश्य र विकास गर्न सजिलो छ - साथै प्रमाणीकरणको साथ कम मुद्दाहरूको पनि। डेभिड, एक। नेट गुरुको रूपमा, SOAP मन पराउँछन् किनकि यसले अधिक जटिल कार्यहरू र अवसरहरू प्रदान गर्दछ।
डेभिडले मलाई एसओएपी अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग ईन्टरफेस (एपीआई) को साथ काम गर्न भित्री रहस्य बतायो ... साबुन। (PS: मेरो एकको सपना जस्तो देखिन्छ APUI २०० from बाट केहि दिन साकार हुन सक्छ!)
SoapUI दुई संस्करणहरूमा आउँदछ, खुला स्रोत र प्रो। प्रो संस्करणले तपाईंलाई खुला स्रोतले गर्ने सबै कुरा गर्न अनुमति दिँदछ, तर प्रति इजाजतपत्र $ 349 for for को लागि उत्पादकता र समय बचत सुविधाहरूको गुच्छा थप गर्दछ।
रूपरेखा र डेटा दृश्यका लागि फारम सम्पादकहरू - जबकि रूपरेखा सम्पादक XML सन्देशहरु मा वास्तविक डाटा को एक महान सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ, फारम सम्पादक अनुरोध मा डाटा प्रविष्ट गर्न को लागी एक सरल इन्टरफेस प्रदान गर्दछ। संयोजनमा दुई सम्पादकहरूले तपाइँको परीक्षण छिटो र सजिलो बनाउँदछ।
डेटा स्रोतहरू - एक डेटा स्रोत आयात गर्नुहोस् जुन तपाईं परीक्षण गर्न चाहानुहुन्छ। सबै प्रमुख ढाँचाहरू समर्थित छन्, पाठ फाईलहरू सहित, एक्सएमएल, ग्रुभि, एक्सेल, निर्देशिका, जेडीबीसी (सम्बन्ध डेटाबेस), र आन्तरिक ग्रिड डाटा स्रोत।
पोइन्ट र क्लिक परीक्षण - विधिहरू तपाईंको परीक्षण सिर्जनाहरू सजिलो बनाउनको लागि द्रुत-बाट-प्रयोग ड्र्याग र ड्रप कार्यक्षमता को लागि अनुमति दिएर।
XPath मिलान दावी - दावी सिर्जना गर्न केहि सजिलो चरणहरू र सेकेन्डमा गरिन्छ।
कवरेज - तपाईले परीक्षण गर्नु भएको सेवाको कार्यक्षमताको कति हेर्नुहोस्? यसले तपाईंलाई एक सिंहावलोकन प्राप्त गर्न र कार्यक्षमताको कुन क्षेत्रहरू राम्ररी जाँच गरीरहेको छ र कुन क्षेत्रहरूसँग तपाईं अझ बढी समय खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भनेर हेर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं अझ तल ड्रिल गर्न सक्नुहुन्छ र ठ्याक्कै ठ्याक्कै के परिक्षण गरिएको छैन र कुन भागहरू जोडिएको छैन।
सुरक्षा परीक्षण - त्यहाँ ती आक्रमणकारीहरू छन् जुन ती pesky ह्याकरहरूले तपाईलाई फ्याँक्नेछन्, जस्तै: XML बम, SQL ईन्जेक्सन, विकृत XML, फजिंग, क्रस-साइट स्क्रिप्टिting आदि। प्रो मा सुरक्षा परीक्षण जेनरेटरले तपाईंलाई भेद्यता स्क्यानहरूको पूर्ण सेट सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। ।
आवश्यकताहरु - SoapUI प्रो को आवश्यकताहरु समर्थन व्यवसाय वा टेक्निकल आवश्यकताहरु को बिरूद्ध तपाइँको परीक्षण म्यापि for को लागी एक धेरै उपयोगी सुविधा हो।
रिफ्याक्टोरि। - एक साधारण "खोजी र बदल्नुहोस्" प्रकार प्रकार्यसँग समाधान गरियो।
SQL बिल्डर - सबैको लागि डाटा पहुँच सजिलो बनाउँदै, तपाइँलाई ग्राफिकल ईन्टरफेसको साथ SQL बयानहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
रिपोर्ट - प्रोजेक्ट, टेस्टसुइट, टेस्टकेस, वा लोडडेस्ट स्तरमा विस्तृत रिपोर्ट उत्पन्न गर्नुहोस्। प्रिन्ट गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई कुनै पनि मानक ढाँचामा निर्यात गर्नुहोस्, सहित पीडीएफ, एचटीएमएल, वर्ड र एक्सेल, र तिनीहरूलाई अनुकूलित गर्नुहोस्।
समर्थन - लाइसेन्स को एक भाग को रूप मा तपाइँ तपाइँको लाइसेंस संग एक बर्षको समर्थन पनि पाउनुहुनेछ।
टैग: APIएपीआई परीक्षणप्रोग्रामिंग उपकरणहरूबाँकीबाकी एपीआईसाबुनसाबुन उपकरणउपकरणXML
उत्तम ट्वीट कसरी लेख्ने
मार्स 11, 2013 मा 6: 16 एएम
धन्यवाद यो पोस्ट गर्न को लागी, डग। मैले विकासका दुबै दृष्टिकोणलाई ग्राहकहरूको लागि प्रयोग गरें। SOAP लाई REST को तुलनामा काम गर्न गाह्रो देखिन्छ किनकि यसको XML संरचनामा निर्भरताका कारण। SoapUI वास्तवमै SOAP कम कम पीडादायी बनाउन सक्दछ ... र तिनीहरूसँग म्याक स्थापनाकर्ता छ! म यसलाई जाँच गर्छु।
यद्यपि यसै उत्कृष्ट उपकरणको साथ पनि, मलाई लाग्छ कि म अझै पनि आधुनिक RESTful API लाई रुचाउँछु। त्यो म roll रोल कसरी गर्छु
मार्स 11, 2013 मा 7: 58 एएम
म तपाइँसँगै @ ट्विटर-33588968:: डिसकसमा छु! तर म यो उपकरणबाट प्रभावित भएँ - र यसले RESTful API का साथ काम गर्दछ।
डेभिड डब्ल्यू ग्रिग्स्बी
मार्स 24, 2013 मा 11: 13 एएम
उनीहरूले भन्छन कि त्यहाँ राम्रो साथीको साथ कफीको लागि सँधै समय हुन्छ र सान्दर्भिक ज्ञान साझा गर्ने क्षमता। धन्यवाद डग बाहिर को लागी र हामी दुबै लाई के साझा गर्न को लागी साझा को लागी र एक महान जोश को क्षमता को लागी धन्यवाद। साथै यसले आरईएसटी कल पनि गर्दछ र तपाईंले तल औंल्याउनुभयो जुन किन यो मेरो मनपर्ने डिबगिंग र प्रोटोटाइप उपकरण एपीआईको लागि हो। अप्रिलमा भेटौंला जब म शहर back मा फर्कन्छु